Kugadzirira nekubatanidza risotto - iyi ndiyo nzira yako iyo risotto yako inobudirira
Gadzirira risotto zvakarurama | Food cooking
Ndezvipi zvingave zvakabatanidzwa mukugadzirira kwe risotto?
Zvikanganiso zvekudzivisa pakugadzirira risotto
Vanhu vazhinji vanofarira kuedza zvokudya zvitsva zvakare kuti vauye nenzira dzakasiyana-siyana mukudya kwavo kwezuva nezuva. Chimwe chidimbu chinozivikanwa mumakishi akawanda ega uye mune zveresitorendi risotto. Mucheka wejunga inogona kunge yakakurumbira nokuti unogona kuzvisiyanisa zvakanaka uye unonongedza nemiti yose.
Chii chinonzi risotto zvakadaro?
Risotto inobva kuchamhembe kweItaly uye mushy rice ndiro. Iko risotto yakanaka yakanyanya kunaka, asi kushandiswa kwemurozi kuchiri "al dente".
Iko risotto yemasikirwe newawawawa, mushonga wewaini uye Parmesan
Kugadzirisa kwekutanga kwakanyanya nyore: Pano, mupunga usina kubvongodzwa unongowedzerwa neeiii nekoroti kana mafuta uye yakabikwa mumucheka kusvikira kudya kunenge kwakakosha.
Zvechokwadi, kutarisirwa kunofanira kutorwawo kuti uone rije ripi rinoshandiswa. Hasi mhando dzose dzomupunga dzinokodzera iyi yakagadzirirwa kugadzira muchere. Nheyo yepakati peiri mupunga inowanzoshandiswa, sezvo inosunungura starch yakakwana, iyo inokonzera kugadzirwa kwakanaka.
Rice pudding, kune rumwe rutivi, haikodzeri zvachose, sezvo inogadzira zvinyoro-pfupi nokukurumidza uye pakupedzisira haina kusimba zvakakwana zvekudya iyi. Risotto inogona kushandiswa seyiyo nzira huru kana sekuendesa kune dzakawanda nyama yezvokudya.
Risotto inogona kugadzirirwa nenzira dzakawanda dzakasiyana. Zvimwe zvinoshandiswa pakubika mupunga ndezvomusi iwoyowo mupuranga wezviyo zvevhu, anonisi, mafuta uye ani nani anoda kutora waini shoma kunze kwemvura. Zvimwe zvacho ndeye nyaya yekuravira, nokuti unogona kupa zvinenge zvese zviri mu risotto.
Campfire uye mushupa chingwa mapeji
Kunyanya kufarirwa ndeParmesan Risotto. Nechinangwa ichi, ndiro inogadzirirwa sezvinotsanangurwa pamusoro apa. Pangosvika rizi yakagadzirwa uye zvinhu zvose mushy, wedzera hura neParmesan kune rizi. Iwe wakatotora chirevo cheParmesan risotto inonaka.
Kunyange mushwasi risotto inowanzosarudzwa semutambo mukuru kana kurutivi rwemanheru. Iko iwe unogadzirirawo zvose maererano neurongwa uye unofunga mahowa maeioni mune imwe pani. Ipapo iwe unopa zvose pasi pehukuru. Parmesan uye mushroom zvinogonawo kusanganiswa, izvo zvazviri zvichienderana nekunaka kwako.
Chimwe chezvikanganiso zvakatanga zvikuru pakugadzirira ndechokuti rizi rinongobirwa kwenguva refu. Izvi zvinongoita kuti uwandu hufadze zvakare. Zvisinei, mupunga unofanira kunge achiri "al dente" kuitira kuti unopisa zvinonhuwira zvakakwana uye kunakidzwa kwezvimwe zvinonakidza.
Iyo risotto mupunga haufaniriwo kushambidzwa kubva mberi, zvisinei kuti icharasikirwa nesimba rayo uye ndiro yose haigoni kushanda. Mukuwedzera, haufaniri kuramba uchigara kure nesitofu kwenguva yakareba, nokuti rizi rinogona kupisa nekukurumidza uye iwe unofanirwa kuputira pakati pezvazviri.
Pheka ne thyme
Koconut mafuta paanobika
Saffron | Zvinonhuwira pavanenge vachibika